जिल्ला अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीको चरम लापरबाही: आइरन चक्की भनेर जुकाको औषधि दिएपछि यस्तो तनाव !
ARCHIVE, NEWSPAPER » जिल्ला अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीको चरम लापरबाही: आइरन चक्की भनेर जुकाको औषधि दिएपछि यस्तो तनाव !
म्याग्दी - जिल्ला अस्पतालले बेनी ५ फुर्केसल्लाकी २० वर्षीया समीक्षा कुँवरलाई आइरन चक्की भन्दै ४ सय एमजीको अल्बिन्डाजोल दिएको भेटिएको छ । अल्बिन्डाजोल जुकाको औषधि हो ।
‘गलत औषधि परेको उजुरी परेपछि पोखरा पुर्‍याएर भिडियो एक्सरे गर्‍यौं, रिपोर्टमा अहिले आमा र गर्भको अवस्था राम्रो देखिएको छ,’ अस्पताल प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. रोशन न्यौपानेले भने, ‘औषधिको प्रभावको बारेमा हामीभन्दा माथिल्लो तहको विज्ञ टिम आवश्यक परेकाले क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालयमा सहयोग माग्दैछौं ।’
‘जुकाको हाइडोज औषधि लामो समयसम्म सेवन गरेकाले हामीलाई बच्चाको भविष्यको चिन्ता छ,’ पीडित समीक्षाले भनिन्, ‘औषधि कुन हो भन्ने जानकारी मलाई भएन । नर्सले यही औषधि नियमित खानु भन्नु भएकोले ७० दिन लगातार खाएँ ।’ - कान्तिपुर दैनिकबाट